Umlomo yishoba lokuziphungela: URamaphosa uyavuma amaphutha - Bayede News
Uhlelo lokutshalwa kwezikhuphekhuphe zeqembu lunogcobho. Uzihlangule kumabibi
Usuku obelukade lulindiwe lugcine lufikile. Lolu bekuwusuku lapho lowo ongumholi we-African National Congress (ANC) noMengameli wezwe, uMnu uRamaphosa ezovela phambi kweKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso neholwa nguMehluleli uZondo. Bese kungokwesibili i-ANC izithola iyochaza ngamathumbu ayo kanye nangezinsolo ngeqhaza layo kanjalo nezinhlaka zayo. Ngonyaka we-1997 lowo owanyenguSekela Mengameli wale nhlangano nezwe, uMnu uMbeki wenza isethulo kuKhomishini Yamaqiniso eyabe iholwa nguSobaba uTutu.
Njengoba kwenzeke kuRamaphosa noMbeki wanikwa izinsuku ezimbili ukuba phakathi kokunye ngokusho kukaMnu uRonnie Mamoepa owayekhulumela uMbeki: “Isethulo sizophathelana ikakhulukazi nokuziphatha: kwabezempi, abezokuvikela nabezobunhloli benhlangano okuqukethe impi enobulungiswa eqondiswe obandlululweni olwalubukwa umphakathi womhlaba wonke njengobugebengu obubhekiswe ezimisweni zobuntu.”
Lapha uMbeki wabe ephelekezelwa ziqonga zikaKhongolose, oMnu uJoe Modise owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela, uSihlalo kazwelonke we- ANC, uMnu uJacob Zuma, uNgqongqoshe Wezobulungiswa uMnu uDullah Omar phakathi kwabanye. Nakulokhu kwaleli sonto uRamaphosa njengoMengameli weqembu nezwe ubengahambi yedwa njengoba ubephelezelwa ziqonga zeqembu okubalwa uMnu uJeff Hadebe, uMnu uGwede Mantashe, uMnu uPaul Mashatile, uMnu uRonald Lamola, uNks uJessie Duarte kanye noNks uLindiwe Sisulu.
Kulokhu uRamaphosa ubeyophendula egameni leqembu kanye noHulumeni awuholayo. Lokhu kubukeke kulukhuni ukukwehlukanisa ngoba iqembu aliholayo yilo futhi elihola uHulumeni. URamaphiosa uya lapha nje bese kunemibono eyehlukene ezweni. Bekukhona abathi ukuya kwakhe kuZondo kutshengisa uholo oluqotho lokhu bekusho bekulumbanisa nesinqumo salowo owayenguMengameli wezwe neqembu uZuma sokuthi ngeke asalubhada kuKhomishini nayisola ngokuningi. Abanye bebeshaya amakhala bethi kuZondo “uya kubahlobo bakhe” abangeke bambuze imibuzo elukhuni. Laba babe ngabokuqala ukuphawula ukuthi ohola ithimba labameli beKhomishini u-Advocate uPaul Pretorius ubuze imibuzo “engathi shu”.
Ngosuku lokuqala uRamaphosa uvumile ukuthi kukhona okungahambanga kahle ohlelweni lokutshala izikhuphekhuphe zeqembu ezindaweni ezimqoka kuHulumeni. Lokhu bekumthinta ngqo ngoba ngokwesikhundla sakhe njengoSekela Mengameli weqembu wayehola ikomiti elabe litshala izikhuphekhuphe zeqembu. Uvumile ukuthi kukhona okungahambanga kahle kokunye wazihlangula yena siqu. “Siyabona ukuthi abantu abangaqeqeshekile ngokwanele bafakwa ezikhundleni. Lokho kufakazela ukwenzelela futhi kubhebhezela ukungqubuzana kwangaphakathi,” ebeka. Uqhube wathi: “Ukuqashwa kwenziwa ngesikhathi esithile futhi ngendlela ethile. Kufanele sikuyeke lokho.”
Nokho phezu kwalokhu ulivikele ilungelo leqembu lokutshala izikhuphekhuphe zalo nathe kwabe kuyingxenye yokuguqula uHulumeni nokufakwa kwabantu abazi ngomgomo kaKhongolose njengeqembu elibusayo.
Okuqaphelekile esethulweni sikaRamaphosa wukuthi konke athi kwabe kungalungile ubekubeka ezinqumeni zeqembu kepha akekho abethi kwafela ezandleni zakhe siqu. Lokhu kwenze kwanda imibuzo ekutheni kanti yena yini athi wayenamandla okuyenza ezikhundleni ayebekwe kuzo. Udaba lokutshalwa kwezikhuphekhuphe zeqembu seluphenduke inhlamba ethukwa ngayo i-ANC ngoba amaqembu aphikisayo athi izwe lisobishini nje yiwo ‘lo mkhuba’.
Usuku lwesibili lube ngolwehlukile njengoba abameli bebehleli odabeni lwemali. Lapha injolozela yabe isemalini eyabe ikhokhwa yizinkampani ezithile kulo iqembu kanye naleyo eyabe ikhokhelwa imikhakhaso ethize. Kulokhu uRamaphosa ukwamukele ukuthi kuningi okungamaphutha okwenzeka nathi ngeke kuphinde kwenzeke. Odabeni nje oluthinta ukuxhaswa
kwamaqembu ngabathile ebhizinisini, uthe umthetho omusha owelusa nolawula ukuxhaswa kwamaqembu okuwuMthetho Wokuxhasa Iqembu Lezepolitiki wumalamulela. Yize lapha uRamaphosa ethe lokhu kuyimizamo ye-ANC umlando wodaba usho okunye.
Ngonyaka wezi-2005 mhla zingama-20 kuMbasa, iNkantolo Enkulu yaseCape Town (Cape of Good Hope Division) yakhipa isinqumo ecaleni elabe liwuNombolo 9828/03. Leli cala lalingodaba lokudalulwa kwamagama abaxhasi ngamaqembu ezepolitiki kuleli. Ekhaleni laleli cala, abamangali kwakuyinhlangano engekho ngaphansi kukaHulumeni i-Institute for Democracy in South Africa (Idasa). Kanti ngakolunye uhlangothi abamangalelwa kwabe kungamaqembu amakhulu ePhalamende ngaleso sikhathi okwakuyi-African National Congress (ANC) iDemoractic Alliance (DA), i-Inkatha Freedom Party (IFP) kanye neNew National Party (NNP). UMehluleli owabe elalele icala kwabe kunguMehluleli uGriesel.
Isicelo sabamangali kwakuwukuthi ‘ukwakha inqubomgomo ezoqinisekisa ukuthi amaqembu ezepolitiki, noma labo abawamele kuzwelonke, ezifundazweni kanye nakoHulumeni Bendawo, bayaphoqeleka ukulandela iSigaba 32(1) soMthethosisekelo kanye neSigaba 11 noma iSigaba 50 soMthetho 2 Wokuthuthukisa Ukuthola Ulwazi wezi-2000 [(Promotion of Acess to Information Act 2 of 2000) (PAIA)], ukuba badalule isamba somnikelo abawuthole kanye negama lenkampani noma umuntu abenze umnikelo’.
Okwaqapheleka lapha wukuthi amaqembu onke ayengabamangalelwa asho ngazwi linye ukuthi ayaphikisana nalokhu. Okwakungokokuqala ngqa ukuthi iqembu elibusayo nalawo aphikisayo kube nento eyenza bakhuluma ngazwi linye. Okwakusobala wukuthi amaqembu ezepolitiki ayengazimisele ukudalula ukuthi imali exhasa imikhankaso yawo iqhamuka kubani kuleli nasemazweni omhlaba.
ElaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi kwakungewona wodwa amaqembu okwakungehli kahle ukuba adalule abaxhasi, kepha nabo abaxhasi uqobo babemanqikanqika. Nxa eziphungela amaqembu aphikisayo ayethi ‘nxa bedalula amagama abaxhasi kungenzeka bajeziswe ngokuthi banganikwa imisebenzi ethize yiqembu elibusayo’. INkantolo yasichitha isicelo sabamangali ngelithi, abamangalelwa okungamaqembu ezepolitiki akukho okuwaphoqa ngokomthetho ukuba adalule abantu noma izinkampani eziwaxhasayo. Nokho phezu kwalokho uMehluleli wecala wathi: “Nokho abafakicala banodaba oluphoqayo oluthinta inqubo nomthetho wokuqhathaniswa ukuthi abaxhasi bangasese kudinga ukuthi balawulwe umthetho oqondile ukuze kuvuleleke futhi kube sobala. E-USA, isibonelo, ukudalulwa komthetho wesizwe waqalwa ngowe-1910.
Kwadinga ukuba amaqembu nezinhlangano zepolitiki ezibanomthelela okhethweni ezifundazweni ezimbili noma ngaphezulu zidalule amagama abo bonke abaxhasi abaxhase nge-$100 nangaphezulu.
Kwanqunywa kanjalo eNkantolo Ephezulu yase-USA. Nokho lokho sekuguqukile njengoba sekunomthetho owelusa ukuxhaswa kwamaqembu ngokuba kudalulwe umnikelo kanye nabaxhasi.
URamaphosa uvumile ukuthi amavenge abe abiwa yimindeni efana nabakwaGupta kanye nabakwaWatson afana nomswane wembabala ngoba anede angena nje enhlanganweni ebusayo ayigovuza. Odabeni nje lwabakwaGupta icala lisala noZuma kanti kulowo wakwaWatson ngenkampani iBosasa uRamaphosa uthe: “Uxhaso lweBosasa kuKhongolose ngolunye lweziwombe lapho saba nephutha.” Kulokhu okuthinta yena ngqo neBosasa uRamaphosa uthe kwaba wumnikelo angawazi ngoba wabe engeyona ingxenye yokuqoqa izimali zomkhankaso wakhe owawaziwa ngeleCR17.
Ekwenzeni iPhalamende udibi
Odabeni lokwenza iPhalamende udibi ikakhulukazi odabeni oluthinta abakwaGupta uthe: “Ngiyavuma ukuthi iPhalamende lineqhaza elilibambayo uma kuziwa ezinsolweni ezifana nalezi, yiqembu elibusayo okufanele linyakaze. Uma lehluleka, iPhalamende kufanele lingenelele, kodwa lizodinga okungaphezu kwezinsolo. Okwaputshuka kumaGupta kwaba wubufakazi okufanele bulandelelwe.”
Uthe lapho ummeli uFreund weKhomishini elandela ethi: “Sekuphele iminyaka engaphezu kwemihlanu, ngabe iPhalamende alikaze liphenye libuye lenze izithangami zokuthola ulwazi lenze lokho okungahle kube khona mayelana nezinsolo ezinzulu kangaka?” URamaphosa uphendule wathi: “Ngiyakuvuma futhi ngiyakwemukela lokho. Kwaba nephutha elenzeka kuleso sigaba.”
Njengoba kwenza uMbeki kwuKhomishini kaTutu, uRamaphosa uye lapha eyovikela inhlangano naye siqu. Yize kusase kuseni kepha kube sobala ukuthi kokuningi uziphungele yena neqembu. KukuZondo nomphakathi ukuthi ukholwe wukuthi wayengazi lutho yena siqu nokuthi iqembu lalingazi ngezinto elizivumayo ukuthi zabe zingamachilo.